Tapakila Desktop ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny
Ny efitra fandraisam-bahiny dia fitsipika ankafizin'ny ankamaroan'ny fianakaviana. Ary mba hahatonga azy ho tsara fanahy, mila manao ezaka ezaka hanaovana izany ianao. Raha anisan'ireo safidy maro momba ny rindrina izay nanapa-kevitra ny hampiato ny safidinao amin'ny wallpapers ho an'ny sary, miezaha hifidy ny safidy tsara indrindra ho an'ny famaranana.
Sary an-tsary any amin'ny efitra fandraisam-bahiny
Andeha hojerentsika ny safidy fototra amin'ny rakitra ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, izay ahafahanao manamboatra ny efitrano ity efitrano ity araka izay tratra.
Ny lohahevitra malaza indrindra momba ny wallpapers dia sary natoraly. Androany, noho ireo teknolojia fanontam-pirinty farany, manana kalitao avo lenta be dia be isika, izay mahatonga ny tanimboly eny amin'ny rindrina ho toy ny zava-misy.
Mahaliana ny mijery ireo zavatra samihafa notifirina tao amin'ny macro. Tavoahangy misy ando amin'ny ravina maitso, raozy marevaka, orkide na sakura, kiririoka na voankazo kafe, sary akaiky, te-handinika indray. Ny fisaintsainana toy izany dia tsy maintsy miala sasatra aorian'ny asa androany, ary ny lohahevitra voafidy amin'ny wallpaper dia tena hahagaga ny vahiny.
Mitandrema ary ny lafiny ara-panatanjahantena amin'ny resaka fanoratana ny rindrina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny wallpaper. Azonao atao, ohatra, ny fampisehoana rakotra aloky ny aloky ny tontolo iainana, afaka manitatra ny sehatry ny efitrano kely ianao, ary ny tonony manga sy manga dia mety tsara ho an'ny fahitana ny halavany.
Raha ny trano fandraisam-bahiny noforonina araka ny fomban'ny loft na hi-tech, dia ny safidy tsara indrindra ny sary hosodoko ho azy dia ho sary lehibe an-tanàn-dehibe.
Tsara homarihina fa ny safidin'ny tapakila voafaritra manokana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny dia tokony hofaritana amin'ny endriny. Ny tapakila toy izany dia tokony hifanandrify indrindra amin'ny loko misy ny gorodona, ny valindrihana sy ny varavarana, fa koa mifanaraka amin'ny toe-javatra iray manontolo, izay mirakitra ireo fitaovana lehibe sy ireo singa madinika.
Ny endrika tatsinanana any anatiny
Kitapo fandroana - safidy maoderina
Trano fandriana ho an'ny ankizy
Tranoben-taratasy - fitaovana maoderina sy vahaolana loko
Aleo manamboatra ny rindrina amin'ny sofina?
Mihoatra noho ny manafana valin-drihana anaty bata?
Asio tabilao amin'ny tananao
Console eo an-dalantsara
Ny fitsaboana ny hatsiaka amin'ny bevohoka - 2 trimès
Fanafody ny tsinay - soritr'aretina
Ahoana no ahitanao akanjo lava amin'ny vala?
Tapakazo mainty ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny
Mahaliana ny manao firaisana
Eckers - varieties ary karazana rafitra
Fanadiovana ny tarehy ataon'ny lehilahy
Akanjo fotsy fotsy amin'ny dantelina
Pardolla ho an'ny fararano 2014
Iza no tsara kokoa - salala na salady mavokely?
Ny vokatra voalohany nandritra ny enim-bolana: Taylor Swift dia nanambady namana iray taona
Ho an'ny zaza 5 volana - fandrosoana, lanjany ary avo
Nanongilan-tsofina taorian'ny fandroana
Andro iraisam-pirenena ho an'ny maha-olona
Tattoo temporaly - karazana sy fomba fampiharana rehetra
Ny famolavolana trano amin'ny minimalism style
20 lifhaki, izay hahatonga ny kirinao ho falifaly
Mastitis amin'ny fampinonoana zaza - soritraretina